Sponsors | WordCamp Harare
Purogiramu yeWPML inoita kuti nzvimbo dzepandaneti dzakagadzirwa neWordPress dzikwanise kuchinjika kuenda kumitauro yakasiyana siyana. Inoshandisa nzira yekuchengeta zvinhu zvawakambotsvaga paindaneti zvisina kudzimwa kuitira paunozozvida zvakare (caching), yozoitawo kuti vanhu vakawanda vanoenda paIndaneti vakwanise kuona nzvimbo yako yepaindaneti zviri nyore ( SEO ) uye kamwewo kapurogiramu kanonzi E-Commerce . Zvose izvi zvinobatsira kuti ukwanise kugadzira nzvimbo yepaIndaneti inokwanisa kuchinjwa kuenda mumitauro gumi nefararira. WPML iyi inosimudza mablog madiki kusvika kumakuru chaizvo.
WPML inobvumira kuti vashandisi vashandure zvinhu zvose zviri padandemutande kusanganisira mwongo wenyaya, mabhatani epamusoro pepeji, maWidgets, kunyange mashoko ose ane chekuita nekutarisika kwenzvimbo yacho yose yepaindaneti (theme) uye mashoko emaplugins. WPML inosimudza madandemutande ezvekutengeserana makuru chaizvo kupota pasi rose anopfuura 500 000.
Mashoko akawanda nezvekuita kuti nzvimbo dzepaindaneti dzingashandisa sei mitauro yakawanda anowanikwa paWPML.org
Tiri kutsvaga vanhu vane chipo. Kana uri Programmer ane unyanzvi unokwanisa kutibata pano: http://wpml.org/home/were-hiring/.